Jungle Assassin - Online
နေအိမ် » RPG » Jungle Assassin
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Jungle Assassin
ဖေါ်ပြချက်: သင်တို့ရှိသမျှသည်အိန္ဒိယနှင့်ပြင်သစ်ဖျက်ဆီးဖို့ငှားကိုကြေးစားယူပြီးနေကြသည်။ သူတို့ကိုဆန့်ကျင် Fight တိတ်တဆိတ်တစ်ဦးဓါးလက်နက်။ ရွှေ့ဖို့မြှားခလုတ်များကိုသုံးပါနဲ့ space bar ကိုတိုကျခိုကျဖို့။
ကစား: 52,103 tag ကို: လှုပ်ရှားမှု, ခြောငျးမွောငျးသတျဖွတျသူ, RPG ဂိမ်း
ခရစ်စမတ် Santa Motocross လှုပ်ရှားမှု
သင်တစ်ဦးသည်နေ့ရက်သည်စန်တာဖွစျလာနိုငျဘယ်မှာဂိမ်းရှာနေနေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်လျှင်ဤသည်သင်၏အခွင့်အလမ်းပါ! www.brightestgames.com စန်တာ Motocross Action.Santa လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံး Xmas Crazy ဂိမ်းသူအားလပ်ရက်ရာသီအတွက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အလုပ်ရှိသမျှကိုငြီးငွေ့သည်ကိုသင်ကမ်းလှမ်း
action ကိုသေနတ်သမားသေမင်း Rush ထဲမှာ run နှင့်တပါးရန်သူများကိုလိုက်ဖမ်းမြို့ရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုးကျော်ခုန်ဖို့သင့် task ဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်များသင့်ရွေးချယ်မှုကို Select လုပ်ပါလျက်လူအပေါင်းတို့ကိုသတ်!
Megaman, သူရှေ့အိပ်သောစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြောင်းပြသသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအချိန်အဆညှိနှင့်ရန်သူများကိုဝန်ဆောင်မှုအတွက်မကစားကြဘူး Dodge မှသွက်လက်ပြသရန်လိုအပ်သည်။
မြေကြီးတပြင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးသောဂြိုလ်သားတပ်ဖွဲ့များဖျက်ဆီးဖို့သင့်ရဲ့အဖွဲ့၏ကျန်နှင့်အတူတက် Join! သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင် personalize နှင့်သင့်ကျယ်ပြန့်လေဆာမွအပါအဝင် add ons တွေကိုနှင့်အတူလက်နက်၏ခင်းကျင်းနှင့်ဒိုင်းလွှားကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။
Kim ကလွတ်မြောက်အအတားအဆီးအဘို့အထွက်ကိုစောင့်ကြည့်ကူညီရန်၎င်း၏သင့်ရဲ့အလှည့်ယခု Tase ဖို့သူ့ကိုလိုက်ဖမ်းနေကြတယ်ကင်ဂျုံအွန်းရဲများကမှဒဏ်ဍာရီ၏ဤမျှလောက်ယူပြီးပြီးနောက်, ဆုကြေးငွေဘို့ဆုပ်ကိုင်အသီးနှင့်ဒင်္ဂါးပြားပျော်စရာရှိသည်ဂိုးသွင်း!
အရေးယူသို့နွေဦး: squarepants SpongeBob
လှုပ်ရှားမှုထဲသို့ SpongeBob နွေဦးတစ်ရယ်စရာ SpongeBob ဂိမ်းဖြစ်စဉ်များ။ လှုပ်ရှားမှုထဲသို့နွေဦးနှင့်သင့် PAL ပက်ထရစ်အချို့ရေခူဆောင်ခဲ့ရမည်။ ဒါဟာစုံလင်သော jellyfishin ရာသီဥတုရဲ့ပက်ထရစ်အချို့သောဂျယ်လီလိုသည်။
လက်နက်တွေရာပေါင်းများစွာ, ပူးတွဲပါဖိုင်, လက်နက်အဆင့်မြှင့်တင်နှင့်ပြောက်ကျားနှင့်အတူ5ထူးခြားသောစစ်သားများစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ ထိုသပိတ်အင်အားစုသူရဲကောင်းများ storyline ၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုထုပ်ပိုးဆက်လက်ဘို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး Play သို့မဟုတ်ရှားရှားပါးပါးလက်နက်တွေအနိုင်ရမှအသစ် slot ကစက်မှာသင့်ရဲ့ကံကြိုးစားကြည့်ပါ
ကွန်မန်ဒို Rush အားကစားပြိုင်ပွဲ။ သင်အကြိုက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်သူရဲကောင်းနောက်ကျောကွန်မန် Rush နှင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောအမြန်မီးမစ်ရှင်တစ်စီးရီးထဲမှာပါ! ကြောက်မက်ဘွယ်သောလက်နက်တွေအပေါင်းတို့နှင့်ဂိမ်းအသစ်သည် Modes သော့ဖွင့်ဖို့အထိအဆင့်သတ်မှတ်။
ကျွန်တော်တို့သေစေနိုင်သော Venom3မှာချွတ်ကျန်ရစ်ဘယ်မှာမှရှေ့ဆက် Going, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိတ်ဆိတ်စွာလုပ်ကြံယခုသူတို့၏မကောင်းသောအအစီအစဉ်များကိုပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မင်းဆက်အခြေခံအဆောက်အဦသို့နက်ရှိုင်းရှာဖွေစူးစမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နယူးကိုယ်ပျောက်တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလက်နက်နှင့်ဝတ်ဆင်အသစ်ဝတ်စုံ။
သင့်ရဲ့အလုပ် GTA စတိုင်မြို့အနားမှာတော်တော်များများကားများခိုးယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အသီးအသီးအဆင့်မှာသင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောကားရနှင့်လစ်လပ်ညွှန်ဖို့သူ့ကိုယူရပါလိမ့်မယ်။ ကားသော့ဖွင့်ဖို့နဲ့နှိုးဆော်သံအားလုံးလုံခြုံရေးတဆင့်သွားနှင့်ရဲဖမ်းမိသွားရှောငျနိုငျသတိထား Be
ဤပထမပုဂ္ဂိုလ်သေနတ်သမားဂိမ်းထဲမှာလှုပ်ရှားမှုအတွက် Rambo, မိမိပြိုင်ဘက်၏အားလုံးယူနိုင်သလဲ လမျးခရီးပေါ်မှာရှိသမျှသောရန်သူများကိုဖယ်ရှားပစ်ရ 19 လက်ပစ်ဗုံးဖွင့်တင်ပေး M249 Squad အလိုအလျောက်လက်နက်, M61 Vulcan နှင့် Mk ကိုသုံးပါ!
သငျသညျ The Expendables, Movies စောင့်ကြည့်ပါသလား အခု The Expendables ဂိမ်း Play!
အဆိုပါ pyro ကောင်လေး
သို့ဖြစ်လျှင်ဤအနည်းငယ်သာပလက်ဖောင်းဂိမ်းကျိန်းသေသင်နှစ်သက်သောပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ Pyro Guy တစ်ဗုံးကျွမ်းကျင်သူနှင့်သင့်ရည်ရွယ်ချက်အတိအကျကိုပစ်မှတ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအစောင့်ရှောင်ကြဉ်ပါနဲ့အမြော်အမြင်ရှိရှိသင့်ရဲ့ပေါက်ကွဲကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်လူမှုကွန်ယက်ကုမ္ပဏီကြီးများ၌တစ်ဦးအာကာသစင်တာကိုဆင်းယူ
သူကသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရောက်ဖို့လက်တွေ့တွင်လျှောက်ထားသင့်ကြောင်းယုတ္တိဆင်ခြင်ခြင်းညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူလက်မှတ်များကိုရှာဖွေသင့်အိမ်၌အတွင်း၌သွားသင့်တယ်မစ်ရှင်ဖြည့်စွက်ဖို့အားလုံးကိုသဲလွန်စရှာတွေ့ဖို့ကောင်လေးတစ်ယောက် junkyard ကိုကူညီပါ။
ဒါဟာသင်သည်သူတို့၏မစ်ရှင်အရှေ့အနောက်စီတာဟာချနိုင်မှအရှေ့ဘက်ကနေသူတို့ရန်သူများရင်ဆိုင်ရဝန်ဆောင်မှုကိုပြသရမည့်အချိန်ပါပဲ။ သူတို့အရာအားလုံးနှင့်အတူကြွလာတော်မူသောကြောင့်ခြောသငျသညျသူတို့သည်သင့် follo ရန်အလွန်အရေးကြီးနိုင်သမျှသောရွှေဒင်္ဂါးပြားရ်ဖြစ်စေလျက်, ထိုးနှက် run မနေပါနဲ့
အဆိုပါကြီးမားသောဆိုး Piranha နောက်ကျောနှင့် hungrier ယခင်ကထက်ပါ!
ဒါကကစားသမားတစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးမြို့အတွက်ပရမ်းပတာပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ကြိုးစားနေသူလူငယ်တစ်ဦးတော်လှန်ရေး incarnates တဲ့သေနတ်ပစ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပေါ်မှာထိန်းချုပ်ပါနှင့်သင့်ခံကတုတ်ကာကွယ်ပေးသည်။ သင့်ရဲ့ခံကတုတ်တခုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်, မှတစ်ဆင့်ခြိုးဖောကျရာမှအာဏာပိုင်များ၏လှိုင်းတံပိုးကိုရပ်တန့်ပါ
ဒါဟာသူ့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုပြသနိုင်ဖို့အချိန်ပါပဲ။ သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ဤတိုက်ပွဲ၌ထည့်သွင်းတုတ်ကျိုးသည်ကို ထောက်. သင်တို့သည်လည်းပြိုင်ဘက်အပေါ်ပေါက်ကွဲရန်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကိုပြသရပါမည်။ သူတို့ကအစဒါကြောင့်အံ့သြသွားဖြစ်ဖို့သတိထားပါဖြစ်စူပါအင်အားကြီးရှိသည်။
သေစေလောက် RPG ကြမ္မာ 2
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းသေစေလောက်ပိုပြီးကြမ္မာရင်ဆိုင်ဖို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ! နိုငျငံတျောသညျတဆင့်စွနှင့်ဤအေးမြစွန့်စားမှု RPG အတွက် treachorous ရှငျဘုရငျဖြုတ်ချရန်သင့်ရှာပုံတော်တခုတခုအပေါ်မှာတပ်မတော်ကိုတည်ဆောက်စေ။ သင့်ရဲ့ကစားရန် mouse နှင့်ကောင်းမွန်သောကံသာအသုံးပြုပါ။
Final Fantasy, ပဟေဠိ Quest နှင့် Bejeweled ၏ဒြပ်စင် blends ကြောင်းလှုပ်ရှားမှု RPG!
spectromancer - အမှန်တရားနှင့်အလှအပ
Spectromancer ရန်သူ AI အဆင်းယူမှဇာတ်ကောင်များနှင့်တိုက်ခိုက်မှုများအတွက်ကဒ်ပြားအသစ်တခုကုန်းပတ်နှင့်အတူပြန်လာ။
အ douchebag ဘဝ
ရုံ douchebag ဖြစ်ပုံစံမျိုးရယူမနေပါနဲ့, အဆိုပါ Douchebag ဘဝအသက်တာအသက်ရှင်နေထိုင်! ထိုကော်လာ pop da ကလပ်ကိုသွားနှင့်မင်းသမီးနှင့်အတူဂိုးသွင်း။
eukarion ပုံပြင်များ 2
ငါ Absolute တစ် Knight အဖြစ်သင်တန်းပြီးမြောက်ရန်ခရီးသွားလာခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သန့်ရှင်းသောအပင်၏အသီးစကားသံကိုအကြှနျုပျစိတျထဲမှာတံပိုးမှုတ်သောအခါ။ ဒါဟာငါ့ကို Kaos ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူတစ်ဦး elf ၏ရူပါရုံကိုပြသသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းငါခေါ်သံကိုလျစ်လျူရှုနိုင်ပေမယ့်ငါမအမှုကိုပြု၏။ ငါအဓိက TR left
Justin Bieber လွှဂိမ်း
ဆိုးယုတ်ရုပ်သေး Justin သူမ၏နောက်ကျောဘေးကင်းလုံခြုံရကူညီသူ့ရည်းစားပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည်။
အဘယ်သူသည် nightlight လိုဦးမှာလဲ ရွှေအဘားစုဆောင်းနှင့်အလင်းအိမ်ထွက်သွားရှေ့တော်၌ထိုထွက်ပေါက်ရ။ အဆိုပါ freaky မျက်နှာဖုံးမီးသာ 13 စက္ကန့် lit, ဒါကြောင့်ဖွင့်မြန်မြန်နေ! မှောင်မိုက်၌5စက္ကန့်ပြီးနောက်, ကျော်ဂိမ်းရဲ့ ...
အောက်မှာနှင့်နယ်ပယ်အမျိုးအစားအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဤ sidescroller အတွက်တိုက်ခိုက်မှာသင့်ရဲ့သေနတ်ပစ်ခတ်။
အသစ်အေးမြနောက်ခံနှင့်ပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူ The Dark Age ဂိမ်းနောက်ဆက်တွဲ,! 24 သူရဲကိုကျော်မီးရထား, 8 သေစေလောက်မှော်ကိုသုံးခြင်း, ရန်သူရဲတိုက်ဆီသို့ဦးတည်နောက်ပိုင်းတွင်သင့်ရဲ့တပ်တွေဦးဆောင်နှင့် 60 ကျော်ဇုန်အနိုင်ရ!
Gunbot အဆင့်မြှင့်တင်, အဆငျ့-ups, ဒိုင်းများနှင့်သေနတ်များတန်ချိန်နှင့်အတူအရေးယူဂိမ်းရိုက်ကူးတဲ့ကန်-မြည်းကိုသေနတ်ပါ!
သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ဆာမူရိုင်းဓားကိုမျဉ်းစောင်းကိုခပ် - ဤစစ်သည်တော်ပိုမြန်သငျသညျမွငျနိုငျထက်လှုံ့ဆျော! နိုငျငံတျောသညျသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို Save, ဒါပေမယ့်စံနမူနာစတိုင်နှင့်အတူကပြုပါ, ကလေး!